3% mepere emepe Manufacturers & Suppliers - China 3% mepere emepe ụlọ ọrụ
Igwe ncha ihu igwe ihu igwe 30 Polyester 70 PVC sunscreen Blind Fabrics
Uru nke ala blinds
(1) Mkpọtụ na mkpọtụ mbelata
The ọhụrụ ụdị ala shutters bụghị naanị na-arụ ọrụ na-enweghị mkpọtụ na ha, ma ọ bụrụ na ezinụlọ dị na a oké ụzụ n'okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, wdg, wụnye ala shutters nwere ike ukwuu belata nnyonye anya nke mpụga mkpọtụ na ndị mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ a jụụ ndụ na mmụta gburugburu ebe obibi .
Nlụpụta Sunscreen Fabric Site China Blinds Factory Sheer Mara Sunscreen Blind
Dị ka okwu a na-ekwu, ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ mgbe niile mgbe ha na-ekpori ndụ. A sị ka e kwuwe, ha arụsiwo ọrụ ike ruo ogologo oge, n'ikpeazụ nwee akwụ́ nke ha, n'ihi ya ha kwesịrị ịrụ ọrụ dị mma nke ịchọ mma mgbe niile. Mana otu esi arụ ọrụ icho mma nke ụlọ ọhụrụ? Maka ndị ọhụụ na-enweghị uche, ọ bụrụ na ha amachaghị, ha ga-ata ahụhụ site na mfu. Taa, anyị ga-ekwu maka otu esi ahọrọ ákwà ngebichi maka mma nke ụlọ ọhụrụ.
Ala Shade Fabric
Choosehọrọ ime ụlọ Childrenmụaka na-ekpuchi anya, ọ bụghị naanị ịtụle mma nke ákwà mgbochi n'onwe ya, kamakwa iji jikọta ụdị ụlọ ahụ dum iji kwekọọ na ibe ha.
Dịka ọmụmaatụ agba nke ákwà ngebichi, agba nke ákwà ngebichi kwesịrị ịdị ka sistemụ agba ime ụlọ iji chekwaa mma nke ime ụlọ ahụ, yana iji gbochie echiche nke ọnya.
Ahaziri Obosara China Windows Curchọ Mma Mgbochi mkpuchi Shading Shutter Blinds Fabric
Họrọ ahaziri obosara blinds ákwà site otutu ihe
Fastgba ọsọ agba: Na gburugburu ebe anwụ na-acha ogologo oge, agba agba nke windo ịchọ mma na-ekpuchi akwa chọrọ ụfọdụ ụkpụrụ iji gbochie akwa ákwà ngebichi windo ịgba. Tụkwasị na nke a, ngwaahịa ndị na-ekpuchi ihe mkpuchi n'èzí ga-enwerịrị ọrụ nhicha onwe.
Ike ọdụdọ: Maka ngwaahịa nwere nrụgide doro anya ma ọ bụ ihe dị mkpa, achọrọ ịtụle ike ikuku nke windo na-ekpuchi akwa.
Light na ọchịchịrị Agba Vinyl Sunscreen Fabric
A na-akpọkarị ihe a na-ahụ maka anwụ anwụ na anwụ na-acha anwụ anwụ. Ọ na-abụkarị ìhè trans missive ma na-echekwa oke ọkụ n'ime ụlọ ahụ mgbe anwụ na-acha ọkụ na-ekpuchi okpomọkụ. Ọdịdị nke sunshade nke ọma abụghị naanị na-eweta ntụ oyi, friji na nchekwa nchekwa n'ime ụlọ ahụ, kamakwa ọ na-eweta ọkụ dị mma n'ụlọ ụlọ ahụ, yana mmetụta mara mma maka mma ụlọ na n'èzí.
Anyanwụ Ihuenyo Ihe apụta Shades Ike ala Blinds Fabric
N'ihe banyere sunshade ihe, ihe ndị mmadụ na-eche bụ ụdị ngwa nke ihe dị iche iche siri ike na ngwaahịa sunshade. Ma site na akụkọ ntolite mmepe nke ihe eji eme sunshade, akwa anwụ bụ ụdị akwa nke nwere mmepe ogologo oge. Site na echiche zuru ụwa ọnụ, teknụzụ na-acha akwụkwọ anwụ na-akawanye nká.
Ire ọkụ Retardant Anyanwụ Anyanwụ Cell Blinds Screen Blinds Fabric
Ahịa Blinds Ahịa
Dị ka aha ahụ na-egosi, vinyl sunscreen polyester sunscreen akwa bụ akwa nke nwere ike igbochi anwụ na ncha ihu igwe, kpuru ìsì mkpuchi anwụ nwere ike ime ka ụlọ ahụ dịkwuo ọkụ, dị nro ma nwekwuo okike. ụlọ ahụ dị jụụ ma nwee udo iji mee ka ndị mmadụ hapụ. n'ozuzu ihe nke anyanwụ cell sunscreen ákwà bụ polyester na PVC sịntetik akwa, sunscreen ákwà si openness dị iche iche, àmà site 1% na 10% nke na-eme ka ọ na-eme na ole pasent nke n'èzí echiche nwere ike hụrụ si ime ụlọ na n'otu oge ahụ , ile ime ụlọ enweghị ike ịkwado ma ọ bụrụ na ị na-ahụ site n'èzí ụlọ ahụ, nke a na-akpọ otu ụzọ mbipute. Blackout ihuenyo ákwà na-adịkarị ọkụ-retardant na ire ọkụ-retardant akwa, dị iche iche ire ọkụ-retardant akara ule, igwe, ọkpụrụkpụ, wdg eduga ọdịiche nke sunscreen ákwà ahịa.
Esịtidem Sunshade Antistatic ustjá Gosiri Solar Protection Screen akwa
Mbara oghere sel
Oghere nke akwa mkpuchi anwụ pụtara ọnụọgụ nke obere oghere nke agha na akwa nke akwa ndo, jiri eriri nke otu agba na dayameta wee kpaa otu ụdị ahụ, ikike iji gbochie ikpo ọkụ na-acha ọkụ na ijikwa ọkụ na obere oghere oghere bụ siri ike karịa nke ahụ nwere nnukwu oghere oghere.
Fashiondị ejiji na-agbanwe mgbe niile, na agba ndị siri ike na-arụ ọrụ mgbe niile na ejiji ejiji n'ihi atụmatụ ha dị nkenke, mana ọ bụghị agwụ ike. Ihe mkpuchi agba siri ike dị mfe na ikuku, nke ga-agbakwunye mmetụta nke ịdị mma na ọnọdụ ụlọ gị. Ka anyị gosipụta ọfụma igosi gị siri ike na agba egwuregwu egwuregwu egwuregwu!
1. overallda n'ozuzu ụda
N'ezie, ọ dịtụ mfe iji kwekọọ ákwà mgbochi na agba siri ike. Y’oburu na ohuru ohuru, inwere ike itule ya. Mgbe ị na-ahọrọ ákwà mgbochi siri ike, ị nwere ike chọọ ịnwa ịdị n'otu. Ọ bụ ezie na mmetụta nke ngosi ahụ esighị ike, ọ dị mfe ma na-emesapụ aka.